European Union inoronga kuunza vekunze mukutumira mameseji kunyorera | Linux Vakapindwa muropa
Iyo dhizaini resolution yakagadzirira uye musimboti, inofanirwa kunge iri yekupedzisira tafura yesarudzo yeKanzuru yeEU musi wa25 wemwedzi uno usati wagamuchirwa.
Dare reEU tenda kuti kuiswa kwe encryption kupera kusvika kumagumo mune yakavharirwa mameseji kunyorera hakufanirwe kudzivirira kuti masimba ehurongwa tevera vananyengeri nemagandanga.
"Chiyero pakati pematanda maviri aya chinodiwa," anoyeuka musangano. Ndosaka iwe uri kugadzirira kutora resolution iyo inovavarira kumanikidza kuunzwa kwemashure kumashure yekushandisa chete kwemauto ekuchengetedza mutemo mukati mekunyorwa kwemeseji kunyorera.
Kugadziriswa rakafemerwa musimboti nechikumbiro kubva kuEU Commission pachayo inowirirana nekuratidzwa kweiyo nyowani EU zano inoita kunge ichiti:
Ylva Johansson (European Commissioner for the Interior) anoti:
"Tichaenda kunopa bhiri rinosungira vanopa rubatsiro paInternet kuti vaone, vataure, vadzime uye varevhe nyaya dzepabonde paInternet."
Mune mamwe mazwi, mune nyaya yekugamuchirwa kwayo, mapuratifomu akaita seSignal, WhatsApp kana Wire shandisa end-to-end encryption achamanikidzwa kuunza nzira yekuti zviremera zviwane zvirimo encryption.
Sekureva kweCommunicational Decency Act (iri kushanda muUnited States kubvira 1996), makambani anopa masevhisi epamhepo anosunungurwa pamutoro wese wezvirimo zvakaburitswa pamapuratifomu avo.
Pasi peEARN IT Act (yakasarudzwa neRepublican Senators Lindsey Graham naJosh Hawley, pamwe neDemocratic Senators Richard Blumenthal Dianne Feinstein mumwedzi waKurume), mamiriro anochinja.
Makambani anomanikidzwa kusiya basa ravo nekupa vanoita zvekuchengetedzwa kwemitemo kuti vatsvage zvimwe zvirimo. Ivo avo vakaita yekupedzisira-kusvika-kumagumo kunyorera vanosiiwa panjodzi yezvinyorwa zvakatumirwa pamapuratifomu avo.
«Iyo EARN IT bhiri, inotsigirwa neSeneta Lindsay Graham (R-GA) naRichard Blumenthal (D-CT), ichabvisa Chikamu 230 chekudzivirira kune chero webhusaiti isingateedzere rondedzero ye" maitiro akanakisa «. Zvinoreva kuti nzvimbo idzi dzinogona kumhan'arirwa kuti abhuruke, ”inodaro Electronic Frontier Foundation
Chizvaro (encryption solution Provider) inoshandiswa nehurumende yeFrance, uyeInotsanangura kuti nei nzira yekuunza yekumashure isiriyo
Mashure kumashure anounza isina kusimba poindi inouraya mukunyorera munhu wese, iyo inozove iyo yepamusoro-kukosha mugumo chinangwa kune vanorwisa.
Chero ani anokwanisa kuona kiyi yepachivande inodikanwa kutyora kunyoreswa anowana zvakakwana uye mumwe anogona kuve nechokwadi chekuti kiyi yekunze ichaburitswa, kungave kuburikidza nekupindira, zvemagariro, kurwisa kwechisimba, kana tsaona.
Hurumende hadzina kuvimbwa dzechitatu mapato kwaari makiyi epachivande anogona kuvimbwa nawo.
End-to-end encryption ndeye yakazara kwese tekinoroji nhasi; kuyedza kudzika mutemo uchipesana neyekupedzisira zvinoita sekuedza kuchinja kosi kana kudzora bazi remasvomhu.
Hurumende dzinochengetedza yavo data vachishandisa kumagumo-kusvika-kumagumo kunyorera chaizvo nekuti havadi kuti dzimwe hurumende dzivasore. Saka kwete chete hunyengeri kune hurumende kutsigira yekunze kwekunze, asi zvinobva zvaisa yako wega data rehurumende panjodzi yekukanganiswa. Kupfuurirazve, kugadzira kwekunze kwezvivakwa kunogadza zvakashata zvakashata kune rese pasirese, uko hurumende dzisina hutano dzichazomboshandisa tekinoroji imwechete kukuvadza kukuru kodzero dzevanhu venyika dzavo.
Encryption ndeye 99,9% inobatsira kune avo vasina-njodzi vechitatu mapato. Kana tikazvishaisa simba, 0,1% yevapambi vemakomputa vachanamatira pamapuratifomu asina madhoo ekumashure nepo 99,9% ichizotambura.
Ndeipi mhinduro, saka, kana kunyorera isiri iyo nzira yekuenda?
Matrix inopa "hama mukurumbira" system kune vashandisi veplatform yayo. Kunzwisisa kwekupedzisira mukusimudzira kunoenderana nemapoinzi mashoma.
Chero ani zvake anogona kuunganidza mukurumbira dhata pamakamuri, vashandisi, maseva, nharaunda, kana Matrix zvemukati uye nekuzviparidzira kune yakakura kana diki vateereri sezvavanoda nekupa iwo ekuzviisa mamakisi pane chero zvirimo muMatrix zvakanaka kana zvisina kunaka mune yakapihwa. mamiriro.
Iyi mukurumbira dhata inoburitswa nenzira yekuti kuvanzika kuchengetedzwe, zvichireva kuti zvinokwanisika kubvunza mukurumbira dhata kana ID yakazvipira ichizivikanwa, asi iyo data inochengetwa pasi pezita rekunyepedzera.
Chero ani zvake anogona kunyorera kune anozivikanwa maficha. Feeds inogona kuve data yakanangana nemushandisi, shamwari, kana masosi akavimbika (semuenzaniso, kambani yekutarisa chokwadi).
Vatariri vanochengetedza maseva mune mamwe masimba vane simba rekusimbisa iyo mirawo yavanoda pamaseva avo (semuenzaniso, vanogona kunyorera kunzvimbo dzinozivikanwa kubva kunzvimbo inovimbwa iyo inoratidza zvemukati zvakatumirwa nevanoshusha pabonde uye voshandisa kuvadzivirira pane yavo server) .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mubatanidzwa weeuropean unoronga kuunza vekunze mukutumira mameseji
Pedro Pino akadaro
Zvinotyisa sei !!!
Pindura Pedro pino
Havangotarise magandanga chete .. vanotarisa kuna Mwari wese, .. kune vasikana vavo, vekare-vasikana .. huyai .. zvinoenda ... tinozivana ...
Enda kune vamwe nenyaya.
Ticha mira kupi. Ichokwadi kuti nyaya idzi dzakaomarara uye dzinokuvadza kune vazhinji, asi tarisa pazviri nemaonero aya:
Fungidzira kuti mwana ane mukana wakawandisa wekushandisa Indaneti zviri nyore. Imhosva yaani iyi? Isu tinoziva kuti tekinoroji inogona kushandiswa munzira mbiri dzakasiyana:
1- Iyo nzira ine hutano uye iyo iyo Internet yakaberekerwa, kutaurirana kure, kudzidza, kudzidza, nezvimwe. Iyo ingave iri nzira yakanaka yekuishandisa, asi yeuka kuti pane imwe nzira yakatosiyana.
2 - Kuita zvakaipa, kuba, kunyepedzera, kutengesa zvigadzirwa zvisiri pamutemo, kukuvadza vamwe vanhu, nezvimwe.
Saka ndichidzoka kumubvunzo wapfuura, ndinofunga kuti mhosva yezvinoitika vabereki, nekuti mwana wavo anogona kunge achishandisa tekinoroji zvakashata kana kuwana nzvimbo dzine njodzi pasina ruzivo, sezvo ini ndichifunga kuti mwana pazera diki zvakadaro Hazvitongwe uye ini usafunge sezvakakosha kuti iwe unofanirwa kuwana mukana wekudyidzana pasocial iyo ndeimwe yemapeji panogona kuitika zviitiko zvepamusoro zvekupfachura uye cyberbullying. Iyo Internet yavo inofanirwa kuve yakabatana kwazvo nezviri mukati memazera avo, kuita mabasa, kutaurirana nemhuri uye neshamwari, kudzidza, kutarisa zvidhori, nezvimwe, asi zvese zvine masimba uye nenguva yakatarwa. Kupfupisa, ndinofunga kuti yakawanda kana yese mhosho iri kuvabereki vavo yekusavimbisa kuchengetedzeka kwavo. Ini pachangu, ndakakura ndisina Indaneti uye hapana chakaipa chakaitika kwandiri, asi, ndakawadzana zvakanyanya uye ndiri kubva panguva iyoyo apo mitambo yechinyakare yaitambidzwa newawakadzidza navo mumugwagwa, takataurirana uye taifara sezvazvino. Ichokwadi kuti budiriro inodikanwa uye ini handisi kuiramba zvachose, tekinoroji yakavandudza nyika asi isu hatimbofa takaikanganwa. Saka ndinofunga kuti kuchengetedzeka uye kuchengetedzeka kunofanira kutanga kumba, kudzidzisa zvidiki kufunga uye kuona njodzi iyo inonzwika kana uchitsvaga Internet.
Ndinoziva kuti haisiyo nyaya asi ndakaverenga zvirevo nokungwarira uye ndinoona kuti Don Jorge anoedza kutaura nemutauro unobatanidza: vana, ivo ... Asi iye anongotaura nezve "vanababa" (kwete vanaamai?)
«Vanhu» (vanofanirwa kunge vari vanhu), «nhengo dzemhuri» (nhengo dzemhuri?), «Shamwari» (kwete shamwari?), «… Mhosva dzose vabereki vavo…» (kwete vanaamai?), «Takabatana mumwe nemumwe »,« Wakatamba newawakadzidza navo »(varume chete?),« Kudzidzisa vadiki… (uye vadiki vacho havana kukodzera kudzidziswa?)… Ndinoziva zvinoita kunge zvisina musoro. Nekuti ndezvekupusa. Chinja chakakomba uye chinonakidza chirevo, saDon Jorge's, kuita amorphous ode kune kuenzana kwevakadzi. Pamusoro penyaya iyi, hapana mubvunzo matsotsi anowana dzimwe nzira dzakachengeteka dzekutaurirana apo CIA nevamwe vavo vekuEurope vachiri kutsvaga zvombo zveSaddam zvekuparadza vanhu vazhinji.